IViz Vectar Plus: Inikezela ngemveliso engenamida | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » Okufumaneka » IViz Vectar Plus: Inika iMveliso engenasimahla
I-Viz Vectar kunye yisoftware esekwe kwi-IP ekhethekileyo, ezisa izisombululo zemveliso ebonakalayo kubasasazi abakhulu kunye nababoneleli bemithombo yeendaba naphina. Abasebenzisi ngoku banokutshintsha, baxube, kwaye bavelise naluphi na uhlobo lwemveliso ebukhoma kumabonwakude, kwi-Intanethi, kunye nasasazweni xa kususwa "imida yemveli" yeefomathi zemithombo yeendaba, I / O, amajelo kunye nokuhanjiswa. I-Viz Vectar Plus ibonelela ngoncedo lokuba namandla okuzisa ukhetho kulungelelwaniso kuzo zombini iziseko okanye kwindawo ye-Cloud kwaye inakho ukusebenza ngaphakathi kuluhlu olubanzi lwezixhobo zenkqubo.
Ukuqhagamshela umnxeba bukhoma Ifakiwe kwiViz Vectar Plus, kwaye isebenzisa zonke ezona zicelo ziphambili zokufowuna ividiyo ezinje nge, Skype ™, MS Teams ™, Zoom Meetings ™, Discord ™, kunye nokunye. Ukwahluka kweqonga kukuba iFowuni yokuNxibelelana ngokuBukhoma idala abafowunelwa kwinkomfa kwimithombo yevidiyo eyahlukeneyo, nokuba yeyiphi na iqonga, ukuhambisa uninzi lwezinto ezinokuyilwa, ukuba nawuphi na umsasazi okanye umboneleli womxholo wemithombo yeendaba angazisebenzisela imveliso yemveliso enamandla kunye nokusebenza.
"IViz Vectar Plus yenzelwe ababalisi bamabali banamhlanje abafumana iindlela ezindala eziya ziphelelwa lixesha, zinzima, kwaye zingabizi mali. Ngokubonelela ngemigaqo eguqukayo, abathengi banokwenza umxholo ongaphezulu komgangatho,
simahla kwiindleko eziqhelekileyo zangaphambili, ” Utshilo uDaniel Nergard, umongameli we Vizrt Ehlabathini lonke. “UkuNxibelelana ngokuTsala uMnxeba ngokulula kuvula iindlela ezingakumbi zokuzisa abadlali abaninzi ebalini, nokuba bakweyiphi na indawo
okanye ukhetho lweapp. ”
Inkulumbuso kwiViz Vectar Plus Ukuqhagamshela iAudio, olu lwandiso lungamangalisayo lusebenzisa itekhnoloji ye-NDI edibanisa yonke into kunye. Ukuhamba komsebenzi weaudiyo kwenza ukuxubana komsindo kunye nokusetyenziswa kwesicelo sokunyusa ubhetyebhetye. Inkqubo entsha yokungena kwakhona yokusebenza ivumela iinguqulelo ezininzi zenkqubo enye ezinokulungiselela umlinganiso wezinto ezahlukeneyo, izigqibo, kunye nemizobo ngokukhutshwa kwangaxeshanye. Eli nqaku linabadlali beendaba abakhelweyo, ukurekhoda, ukusasaza, iaudiyo, kunye nolawulo lwemizobo, leyo I-Viz Vectar kunye Isebenza ngezixhobo zekhompyuter eziqhelekileyo kunye nolwakhiwo lwenethiwekhi olunonxibelelwano lwe-IP olwenza ukuba ii-studio, iikhampasi ezinkulu kunye namaziko eshishini ahlangabezane nemfuno. Phantse imithombo yevidiyo ye-IP engenamda kubandakanya SMPTE I-2110, i-NDI, i-SRT, i-RTMP, i-RTP, i-HTTP, i-SRC, inokufikeleleka kwaye isetyenziswe ngaxeshanye, ukubonelela ngoqhagamshelo nazo zonke iintlobo zezixhobo zemidiya, kubandakanya i-NDI® | usetyenziso lwekhamera yeHX yeefowuni.
IViz Vectar Plus yenza ukuba ubume bezorhwebo kunye nokufikeleleka kwayo nayiphi na imeko yabasebenzisi, kwaye inokusasazwa ngokukhawuleza kwinyanga nganye. Izicwangciso zixabiso ukusuka $ 2,995 USMSRP ngenyanga. Elona xesha lincinci lesivumelwano yinyanga enye. IViz Vectar Plus iya kufumaneka kuqala October 2020. Amaxabiso wamazwe ngamazwe ahluka.
*PHAWULA: Ukufikelela ngokuNxibelelana ngokuBukhoma kubandakanya isimahla kwisivumelwano sokuqala sazo zonke iiodolo zeViz Vectar Plus ezenziwe ngaphambi kukaDisemba 31, 2020.
Vizrt, Imfutshane yokuBonwa kweXesha leNene okanye iGcisa eliBonakalayo, yinkampani yaseNorway eyenza imveliso yokuqulatha umxholo, ulawulo kunye nezixhobo zokuhambisa imboni yemidiya yedijithali. Vizrt ngumboneleli okhokelayo wehlabathi wezixhobo zokubalisa amabali zabenzi bemxholo yemithombo yeendaba kusasazo, ezemidlalo, ezidijithali kunye neesports. Vizrt ibonelela ngesisombululo esisekwe kwintengiso esisekwe kwisoftware kwimizobo ye-3D yexesha lokwenyani, ukudlala ividiyo, istudiyo esizisebenzelayo, uhlalutyo kwezemidlalo, ulawulo lweasethi yemithombo yeendaba, kunye nezixhobo zamabali eendaba. VizrtIsithembiso kukuqonda ubunzima kunye nokwandisa ubuchule. Abantu abangaphezu kweebhiliyoni ezintathu babukela amabali abaliswa ngu Vizrt abathengi mihla le kubandakanya iinkampani zosasazo ezinje nge CNN, CBS, NBC, Fox, BBC, BSkyB, Sky Sports, Al Jazeera, NDR, ZDF, Network 18, Tencent, nezinye ezininzi. Vizrt yinxalenye ye Vizrt Iqela kunye neempawu zalo zoodade, NewTek kunye NDI®. Vizrt kulandela injongo enye yeli qela; amabali amaninzi, kuxelelwa ngcono. www.vizrt.com
UMateyu usebenze kwicandelo labucala nakwimfundo ephezulu iminyaka engaphezu kwama-25. Usebenza ngokukhethekileyo kwimimandla yolawulo lweprojekthi yedijithali, ukusasazwa kobunjineli kunye nemveliso yeendaba. UMateyu unolwazi olubanzi kwimveliso yedijithali, ulawulo lweeaseti zedijithali, imveliso yecinema yedijithali, kunye nokudityaniswa kweziko losasazo. Umnumzana Harchick uphanda ngenkuthalo imeko yosasazo lobugcisa, ukusika i-cinema yedijithali kunye neetekhnoloji ezibonakalayo ezivakalayo zokumiliselwa kwabathengi kwaye iyafumaneka kwiimfuno zakho zokubonisana.
UMat kunye nentsapho yakhe ngoku bahlala kwindawo yaseMashington, DC.
Izithuba ezandwendwe nguMat Harchick (ndinibone nonke)
IViz Vectar Plus: Inika iMveliso engenasimahla - Septemba 22, 2020
2020 #NABBonisa njani: I-CineCentral Pavilion! - Matshi 9, 2020
2020 #NABBonisa njani: Ngaba uyifumene ipasi lakho? - Matshi 4, 2020
Previous: URebecca Eskreis 'Yintoni eqhekeza umkhenkce "kwiNkulumbuso kuMnyhadala weFilimu waseWoodstock
next: UMagewell kwi-Showcase Pro AV Innovations yeHlabathi eliguqukayo kwi-InfoComm China